Fitaovana manohitra vorona
Tenim-borona fanoherana vorona
Fitaovana zaridaina maro tanjona
Trellis harato plastika
Netim-bary sy tsaramaso
Olive Manangona Netting
Pegs fametahana plastika
Arovy ny zaridainanao - Aza miandry bibikely, serfa ary vorona handroba ny zaridainanao.
Arovy ny voninkazo, ny voankazo, ny voaroy ary ny legioma ary hadinoy mandrakizay ireo mpiditra an-tsokosoko.
Mora apetraka, azo ampiharina sy azo antoka, harato maharitra be izay maharitra mandritra ny taona maro.
Ny firafitra manohana ny vorona dia mamela hazavana sy hamandoana hahatratra ny voankazo sy ny vokatra.
100% Marika vaovao sy avo lenta.
Ny haraton'ny vorona fanoherana vorona dia vita avy amin'ny monofilament HDPE ary manolotra fiarovana maharitra ho an'ny karazan-javamaniry sy zavamaniry manohitra ny vorona sy ny mpiremby rehetra. Ny sakany dia misy hatramin'ny 20m ho an'ny faritra lehibe kokoa. Ny androm-piainan'ny net dia 4-6 taona, miankina amin'ny toetran'ny fampiasana. Ity vokatra ity dia azo ampiasaina miaraka amina tranom-boankazo, mba hanaronana ny tafontrano ary koa azo ampiasaina handrakofana ireo dobo mba hiarovana ny trondro amin'ny fanafihana heron raha toa ka mitazona ny ravina koa.
Ny harato fiarovana ny voly zaridaina dia natao hiarovana ny zaridainanao sy ny fanaingoana anao amin'ny vorona, biby ary mpiditra hafa. Hita amin'ny habe maromaro.
Plastika Garden Trellis Mesh dia fantsom-baravarana HDPE UV miorina amin'ny lavaka toradroa mety tsara amin'ny fanohanana zavamaniry miakatra, na fiarovana zaridaina.
Safidy maivana ho an'ny trellis hazo na tariby izy io ary arovana UV ka haharitra.
Gutter guard harato, plastika mpiambina tatatra plastika manarona ny mpiambina ny tatatra mesh mihetsiketsika amin'ny farango ho an'ny ravina orana, Ampiasaina amin'ny Fitaovana & Fanatsarana trano - Ampiasaina betsaka amin'ny vokatra anaty rano, fiompiana akoho amam-borona, hetsika voajanahary, fananganana sivily, fikojakojana vokatra anaty rano, golf zaridaina fiarovana ny Mazava ho azy.
Pea sy Bean Netting dia jono polyethylene harato maitso, tohana ho an'ny tsaramaso mpihazakazaka, voanjo, voanjo mamy ary zavamaniry miakatra hafa - miaraka amin'ny tsaramaso mpihazakazaka manokana mandray soa avy amin'ny harato rehefa rakotra rindrina.
Ny harato manjelatra lolo vita amin'ny HDPE matanjaka sy UV miorina, mahatsiaro ho toy ny lamba malefaka ny hikasika azy ary haharitra mandritra ny taona maro. Fahazavana ampy hipetraka mivantana eo ambonin'ny voly ary ampy hampiasaina handrakofana sary, tranom-borona na hoop.
Miasa ho toy ny sakana ara-batana eo anelanelan'ny voly sy ny lolo manakana azy ireo tsy hanatody ary avy eo ny fanday mihinana ireo vokatra.
Ny lamba namboarinay dia namboarina sy namboarina mba hahafahan'ny airflow mitazona anao hihamangatsiaka kokoa ary tonga amina karazan-javatra fonosana, amin'izay dia ho hitanao mora foana izay mifanaraka amin'ny ilainao.
Ny lamba landy dia ampiasaina amin'ny fampiharana mifandraika amin'ny fiarovana ny voly sy ny fambolena.
Ny lambam-baravarana fiarovana dia mety amin'ny fiarovana ny vokatra sy ny fisarahana ny vokatra amin'ny dingana rehetra, ny fikirakirana, ny fandefasana ary ny fitahirizana. Ny bolongana misokatra amin'ny diamondra dia manafoana ny hamandoana, ka miaro amin'ny harafesina sy ny harafesina. Tsy hanimba ny fitehirizana, hisorohana ny fahasimban'ny any ivelany. Azo ampiasaina amin'ny fonosana voankazo sy legioma, fohy sy tsara tarehy ary mora entina.
Sarimihetsika Fefan'ny fiainana manokana vita amin'ny fitaovana HDPE, ny lafiny efatra dia vita amin'ny fitaovana nohamafisina ary nofenoina grommets tamin'ny sisiny efatra, avy eo fonosina sy nalefa vonona hametraka. Ny lamba dia miorina amin'ny UV ka afaka manohitra ny fanjavonany ary mitazona ny tanjaky ny fitaovana mandritra ny taona maro. Azo ahantona mora amin'ny fatorana zip amin'ny fametrahana. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny tokotany, zaridaina, faritra dobo fihazonana, fitsarana, hetsika, lavarangana ary zaridaina.
Anti-hail Net dia natao hanaronana ny hazo paoma, tanimboly, tanimboaloboka ary trano fonenana. Polyethylene avo lenta, miorina mafy amin'ny taratra UV, ampiasaina hisorohana ny fahasimban'ny havandra amin'ny voly isan-karazany. Manampy amin'ny fiarovana ny hazo sy ny voankazo amin'ny vorona raha mbola mamela ny tara-pahazavana maro hamakivaky.
Ny harato fanoherana ny havandra dia maivana, malefaka ary mora apetraka ary esorina.
HDPE Olive Net ho an'ny Olive Harvest dia vita amin'ny maivana maivana sy maharitra fitaovana UV stabilized polyethylene.
Manana karazana meshes isan-karazany ireo harato hahafahana manatsara ny fomba fijinjana oliva sy voankazo samihafa.
Izy io koa dia azo ampiasaina hanangonana voankazo marobe toy ny kennuts, oliva, hazelnuts ary chestnuts sns.
CONSULTATION MAIMAIMPOANA +86 519 86059966
ADDRESS Room A2309, World Trade Center, No. 16 Yanzheng Road, Distrikan'i Wujin, Changzhou, Faritanin'i Jiangsu, Sina 213164